အရောင်အသစ် အဆန်းတွေနဲ့ နည်းပညာသစ်တွေ ပေါင်းစပ်လာတဲ့ 2022 Porsche Taycan ! – MyMedia Myanmar
အရောင်အသစ် အဆန်းတွေနဲ့ နည်းပညာသစ်တွေ ပေါင်းစပ်လာတဲ့ 2022 Porsche Taycan !
Porsche အနေနဲ့ သူ့ရဲ့ နာမည်ကျော် Taycan ကားမျိုးကွဲသစ် တစ်စီးကို ထုတ်လုပ်ပေးမယ်လို့ မကြာခင်ကပဲ သတင်း ထွက်လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုဆိုရင်တော့ လာမယ့်လ မြူးနစ်မှာ ကျင်းပမယ့် IAA ကားပြပွဲ ထဲဆီကို အသစ်အဆန်း တစ်ခုခု ယူဆောင်လာမယ်ဆိုပြီး ကုမ္ပဏီဘက်ကချပြလာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လက်ရှိ အနေအထားမှာကိုပဲ 911 နဲ့ 718 ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ ရောင်းအားကတော့ ထင်မထား လောက်အောင်ကို မြင့်တက် နေတာတွေ့ရမှာပါ။ Porsche Taycan လိုပဲ တကယ်တမ်း ဒီထက်ပိုပြီး ထိပ်ဆုံးကနေပဲ ဦးဆောင်ချင်တယ် ဆိုရင်တော့ အမြဲတမ်း တိုးတက်အောင် ကြိုးစား နေရမယ်ဆိုတာလည်း ကုမ္ပဏီဘက်က သိထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း အခု အသစ်ထွက်လာမယ့် 2022 Model အတွက်ကိုတော့ အများကြီး အဆင့်မြှင့်တင်မှုတွေ လုပ်လာတာဖြစ်ပြီး ပိုင်ရှင်တွေ အဖို့တော့ အခြား ကားတွေနဲ့ ယှဉ်လိုက်တာနဲ့ ထင်းခနဲ ဖြစ်ပြီး ဆွဲဆောင်မှု ကောင်းစေမယ့် အရာတွေလည်း ပါဝင်လာဖို့ ရှိပါတယ်။
အခုလို အဆင့်မြှင့်တင်မှုတွေကိုတော့ သာမန် Taycan အမျိုးအစားနဲ့ Cross Turismo Version တို့မှာ စတင် ထည့်သွင်းလာမှာပါ။ ပထမ ဆုံးအနေနဲ့ နည်းပညာပိုင်းမှာ အပူထိန်းညှိစနစ်နဲ့ အားသွင်းစနစ်သစ်တွေ ကို အဆင့်မြှင့် တင် ပေးလာဖို့ ရှိပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကားရဲ့ လက်ရှိ Turbo Charging Planner က အပူရှိန် ပိုမြှင့်နိုင်ဖို့ ဆိုရင် ဘက်ထရီ ကို လိုအပ် နေသေးတာ ဖြစ်ပြီး အမြန်အားသွင်း စနစ်ကို ရဲ့ မြန်နှုန်း ကိုလည်း မြှင့်တင် ပေးထားတာပါ။ ဒါပေမယ့် အခု အဆင့်မြှင့်တင်မှုကနေ လျှပ်စစ်ပစ္စည်း အစိတ်အပိုင်းတွေ ဆီက အပူရှိန်ကိုပဲ ပိုသုံးလာ နိုင်တာကြောင့် ဘက်ထရီရဲ့ အပူချိန်တွေကို ထိန်းညှိပေးနိုင်မယ့် နေရာမှာ သေချာပေါက် ပိုမို တိုးတက်လာမှာပါ။ နောက်ထပ် ထူးထူး ခြားခြား ပါဝင်လာမှာကတော့ Remote Parking Assist စနစ် ဖြစ်ပါတယ်။ ကားကို စမတ်ဖုန်းကနေ တစ်ဆင့် ထိန်းချုပ်ကာ အပြိုင် ထိုး ရမယ့် ကားပါကင်နေရာတွေ အပါအဝင် သာမန် ပါကင်နေရာတွေမှာပါ အလွယ်တကူ ထိုးပေးနိုင်မယ့် စနစ် အသုံးပြုလာနိုင်မှာပါ။ အဆိုပါ စနစ်မှာတော့ ပါကင် ထိုးနိုင်မယ့်နေရာ အကျယ်ကိုပါ တစ်ပါတည်း တွက်ချက်ပေးနိုင် ပြီး အမျိုးမျိုးသော Ultrasonic Sensor တွေ နဲ့ ကင်မရာတွေ သုံးကာ အလိုအလျောက် ပါကင်ထိုးပေးသွားတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ နေရာကျယ်ကျယ်လွတ်လွတ် ရနိုင်မယ့် ပါကင်နေရာ တွေ့ခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်း Porsche Connect App ကနေတစ်ဆင့် ကားပါကင်ထိုးတာကို လုပ်ဆောင်နိုင်တော့မှာပါ။ ဒါကြောင့် ကားမောင်းပြီး လိုရာ ရောက်တာနဲ့ ယာဉ် မောင်းကကားထဲက ထွက်ပြီး ပါကင် ထိုးခိုင်းစေကာ ကားကို ထားခဲ့လို့ ရတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် App မျက်နှာ ပြင်မှာတော့ ခလုတ်တစ်ခုကိုနှိပ်ပြီး ဖိထားဖို့တော့ လိုအပ်နေဦးမှာပါ။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ အဆိုပါ ခလုတ်လေးကို ယာဉ်မောင်းက ဖိထားရာကနေ လွှတ်လိုက်တာနဲ့ ကားရဲ့ အလိုအလျောက် ကားပါကင် ထိုးစနစ်ကလည်း ရပ်တန့် သွားမှာမို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သိပ်ပြီး မထူးခြားတော့ပေမယ့်လည်း လက်တွေ့ အသုံးဝင်လာမယ့် လုပ်ဆောင်ချက် အသစ်တစ်ခုကတော့ Android Auto ပထမဆုံး အကြိမ် အဖြစ် ပါဝင်လာတာပါပဲ။ ဒါ့အပြင် Infotainment System ရဲ့ တစ်ခြားသော လိုအပ်ချက် တွေကိုလည်း အဆင့်မြှင့်တင်ပေးလာ သလို Voice Pilot Assistance ကလည်း နေ့စဉ် သုံးဘာသာ စကား တွေနဲ့ ပိုပြီး ရင်းနှီးကောင်းမွန်လာပြီဖြစ်ကာ ပြန်လည်ဆန်းသစ်ထား တဲ့ Graphic ဒီဇိုင်းသစ်တွေနဲ့ အချက်အလက်တွေ ကိုလည်း ကောင်းကောင်း ပြသပေးလာနိုင်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Layout တစ်ခုလုံးနဲ့ Operating System တွေကိုလည်း အဆင့်မြှင့်တင်ပေးလာတဲ့အပြင် Central Display ရဲ့ ဘယ်ဘက် ယခင်ရွေးချယ်စရာ Menu Options ၃ ခု တည်း အစား ၅ ခု အထိ အဆင့်မြှင့်တင် ပေးလာပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Icons တွေကိုလည်း သီးသန့် စိတ်ကြိုက်နေရာရွှေ့ ပြင် ဆင်ပြောင်းလဲ နိုင်ဦးမှာပါ။
နောက်ဆုံးမှာတော့ ဆွဲဆောင်မှု အရှိဆုံးအရာတစ်ရပ် Taycan ကို ရောက်ရှိလာပါပြီ။ အဲ့ဒါကတော့ ဆန်းကြယ်လှပတဲ့ အရောင်အသစ် တွေထပ်ထည့်ပေးလိုက်တာပါပဲ။ အထူးသဖြင့် 911 ရဲ့ 964 Generation မှာ နာမည်ကျော် ကြားခဲ့တဲ့ အရောင်တွေလည်း ပြန်လည် ပါဝင် လာပါတယ်။ သီးသန့် ဖန်တီး ပြသထားတဲ့ နမူနာ အရောင်တွေကိုလည်း အခု ရရှိလာပြီ ဖြစ်တာကြောင့် Standard အရောင်အနေနဲ့ ၁၇ ရောင်အထိ ရှိလာပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် နောက်ထပ် အပိုဆောင်း အရောင်သစ် ၆၅ ရောင် အထိကိုလည်း ထည့်သွင်းပေးလာပြီး Moonlight Blue Metallic ၊ Acid Green ၊ Rubystar ၊ Riviera Blue နဲ့ Violet Metallic တို့ဆိုပြီးလည်း ထူးထူးခြားခြား အရောင် ဆန်းလေးတွေ ပါဝင်လာပါ သေးတယ်။ နောက်ထပ် အကြိုက်တွေ့စရာကတော့ နမူနာ ပြထားတဲ့ ‌အရောင်တွေအပြင် ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ အရောင်ကိုပါ ပြောပြီး ဖန်တီးလို့ရတဲ့ အထိ ရွေးချယ်ခွင့် ပေးထားလိုက်တာပါပဲ။ အဆိုပါ မော်ဒယ်အသစ် Taycan တွေ ကိုတော့ အရောင် စုံစုံလင်လင်နဲ့အတူ လာမယ့် စက်တင်ဘာ လ ကစလို့ ဈေးကွက် တွေထဲကိုဖြန့်ချီပေးသွားတော့မှာ ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
The post အရောင်အသစ် အဆန်းတွေနဲ့ နည်းပညာသစ်တွေ ပေါင်းစပ်လာတဲ့ 2022 Porsche Taycan ! appeared first on MyCars Myanmar.
MyMedia Myanmar2021-08-26T16:31:26+06:30August 26th, 2021|MYCARS MYANMAR|